“Real Madrid waxay ku nooshahay waqti layaab ah laakiin…” – Zinedine Zidane – Gool FM
“Real Madrid waxay ku nooshahay waqti layaab ah laakiin…” – Zinedine Zidane
Dajiye November 30, 2020
(Madrid) 30 Nof 2020. Tababaraha reer France iyo kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa sheegay in Los Blancos ay ku nooshahay waqti layaab leh sababa la xiriira xilli ciyaareedkan, kaddib markii ay la kulantay dhaawacyo badan iyo diyaar garowga liita ee xilli ciyaareedka, sababo la xiriira saameynta caabuqa Korona Fayras.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Marca” ee dalka Spain Zinedine Zidane ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan dareemayaa isla baahidii, laakiin waxaa jiray waxyaabo la yaab leh xilli ciyaareedkan.”
“Dhaawacyo, diyaar garowga fudud ee xilli ciyaareedka, iyo dhammaan saameynta xun ee kooxda, laakiin rabitaanka wali waa sidiisa.”
“Wali ma dhimanin rabitaanka kooxdan, ciyaartoyda way garanayaan meesha ay joogaan iyo waxa loola jeedo ka ciyaarista Real Madrid.’
“Marwalba waxaan leenahay rabitaan, marka aan ciyaarno ciyaar xun, marnaba taas kama jahwareerin rabitaankeyga.”
Si kastaba ha ahaatee, Deportivo Alaves ayaa Sabtidii guul ka soo heshay kooxda Real Madrid oo ay ku booqatay garoonka Alfredo Di Stefano, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga, waxayna guuldarradan xaalada ku sii xumeysay naadiga Los Blancos.
Kooxda Juventus oo xiiseynaysa daafac ka tirsan Atletico Madrid, kaasoo heshiiskiisa haatan uu ku eg yahay 2022
Man United oo iska fasaxeysa AFAR ciyaaryahan si ay ula soo saxiixato daafac ka ciyaara horyaalka La Liga